Apple waxay ku darsaneysaa Dukumiintiyada iCloud iyo Adeegga Xogta iCloud Drive Maajo 2022 | Waxaan ka socdaa mac
Wargeysku wuxuu ku takhasusay Apple iyo teknolojiyadda, MacGeneration, ayaa daabacday sida ku cad macluumaadka cusub ee ay hayaan, Apple wuxuu damacsan yahay inuu isku daro Adeegyada dukumiintiga iCloud iyo xogta ee leh adeegga iCloud Drive. Midowgan ayaa loogu talagalay in la fuliyo bisha May ee sanadka soo socda. Sannadka 2022, sidaasna ku siineysa isticmaaleyaasha waqti isbeddel.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan caddeynno dhowr fikradood. Waxaa laga yaabaa inaad horeyba u ogayd, laakiin waligood dhib malahan inaad sifiican u qeexdo waxa aan ka hadlayno. Sidaa darteed, waxaan ognahay in iCloud ay tahay adeeg daruur kaydineed oo loo isticmaalo adeegyo kala duwan oo ay Apple bixiso. Halka iCloud Drive wuxuu u shaqeeyaa sida OneDrive, tusaale ahaan, adeeg gala iCloud.
Waxay wadaagaan awoodda muhiimka ah ee lagu kaydin karo xogta arjiga. Si kastaba ha noqotee, dukumiintiyada dataiCloud‌ iyo xogta badanaa waxay ahaayeen khibrad isku dhafan oo wareersan. Si ka duwaniCloud Drive‌ waa mid midaysan, oo adeegsadayaashu waxay ka heli karaan faylalka iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin barnaamijka Faylasha ee dhammaan aaladooda.
Laga bilaabo Maajo sanadka soo socda, isticmaalayaasha adeegsanaya dukumiintiyada ‌iCloud and iyo xogta waxay akoonadooda si otomaatig ah ugu guuri doonaan 'Cloud Cloud' Si kastaba ha noqotee, isticmaalayaashu waa inay gacanta ku sahlo ‌iCloud Drive‌ si aad u daawato feylashaada mar haddii isugeyn dhacdo. On Macs, waa inaan tagnaa Xulashada Nidaamka -> ‌iCloud‌, oo xulo ‌iCloud Drive‌ macOS. Bisha Meey 2022, dukumiintiga ‌iCloud‌ iyo adeegga xogta waa la joojinayaa waxaana gebi ahaanba lagu beddelayaa CloudiCloud Drive‌.
Nidaam macquul ah iyadoo la tixgelinayo in Faylka App-ka uu doonayo inuu ahaado halka aan ka heli karno dhammaan xogta aan ku hayno mid ka mid ah aaladaha Apple. iCloud Drive wuxuu noqdaa barta kaliya ee lagu kulmo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple waxay ku biirineysaa Dukumiintiyada iCloud iyo adeegga xogta iCloud Drive bishii Maajo 2022
AirPods Pro oo leh qiime aad u hooseeya